Isaziso sokulungiswa kwamanani entengo
Ozakwethu Abathandekayo Abathandekayo, Ngenxa yokushoda, ukuhlinzekwa okuqinile kwezinto zokusetshenziswa, ukwanda kokunciphisa amandla nezindleko zamandla.Sihlala senza imizamo yethu yokuthola izindleko ezandayo ngohlangothi lwethu, ukugwema ukwanda kozakwethu, kepha isimo siya siba sibi kakhulu, asikwazi ukubekezelela ukwanda okuqhubekayo ...
I-Polyquaternium-10 / Hydroxyethylcellulose Ethoxylate / Cationic cellulose
I-Polyquaternium-10 yisimo sokusebenza esivumelana nokuthinteka okusetshenziswa kuhlu olubanzi lwemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu. I-Polyquaternium-10 iyi-cationic-ancibilikisa amanzi, imnene futhi iyahambisana kakhulu nezinhlelo ezahlukahlukene ze-anionic, amphoteric, nonionic kanye ne-cationic. Isetshenziswe ikakhulukazi ezinweleni c ...
Ukukhombisa kahle iphrofayili yenkampani yethu, ubuchwepheshe, ukubhekelela umphakathi, intuthuko esimeme, nokusiza bonke ozakwethu abakhona nabangahle basibambe ngekhanda kalula, sibuyekeze uphawu lwenkampani yethu. I-Y & R ingumkhiqizi nomhlinzeki ofanelekayo, okucwaningiwe futhi kuvunywe yi-SGS, siqinile ...
I-Resveratrol - isithako sokwephula umhlaba
I-Resveratrol iyinhlanganisela ye-polyphenolic etholakala kabanzi ezitshalweni. Ngo-1940, amaJapan aqala ukuthola i-resveratrol ezimpandeni ze-albhamu yezitshalo. Ngawo-1970, i-resveratrol yaqala ukutholwa ezikhunjeni zamagilebhisi. I-resveratrol ikhona ezitshalweni eziku-trans and cis free forms; womabili la mafomu ane-antioxidant biol ...
I-YR Chemspec ingumkhiqizi nomhlinzeki ofanelekayo, ohlolwe futhi wavunywa yi-SGS, silandela ngokuqinile i-Quality Management System ISO9001: 2015. Njengoba ihlelwa kabusha ngo-2016, senza i-R & D, Production, i-OEM kanye nokusabalalisa iphothifoliyo ebanzi ebanzi, okukhethekile ...
i-hyaluronic acid emzimbeni wakho
Yini i-Hyaluronic Acid? I-Hyaluronic Acid (HA), eyaziwa nangokuthi i-hyaluronan noma i-hyaluronate, i-carbohydrate, ikakhulukazi i-mucopolysaccharide eyenzeka ngokwemvelo kuwo wonke umzimba womuntu. Kungaba izinkulungwane eziningana zoshukela (ama-carbohydrate) ubude. Uma ingaboshiwe kwamanye ama-molecule, iyabopha ...
I-Hyaluronic Acid iyisimangaliso semvelo se-molecule yothando lwamanzi enisela uhlelo ngamandla alo okuthola isisindo esifinyelela izikhathi eziyi-1000 emanzini. Izinzuzo ezitholwe ekuthatheni noma ekusebenziseni i-HA zehluke kakhulu kumuntu ngamunye futhi zitholakala emzimbeni wonke kubandakanya isikhumba, amalunga ...
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate —— I-oda elisheshayo elingu-100kg
Ngenxa yesinqumo sekhasimende lethu ku-0rder 100kg Ascorbyl Tetraisopalmitate ngesikhathi esifushane kangaka. Ukusetshenziswa kwe-Ascorbyl Tetraisopalmitate: * * Ukuvikelwa kokulimala kwelanga * * Ukulungiswa kokulimala kwelanga * * Antioxidant * * Ukususa amafutha ne-hyd ...
Isitifiketi 'Somhlinzeki Ohloliwe' esibuyekeziwe
NgoMeyi.20,2021, iSGS iphinde yacwaninga inkampani yethu ukuqinisekisa ukuthi inhlangano yethu iyisikhubekiso esithembekile emakethe yomhlaba. Ngemuva kokuthi abacwaningi mabhuku be-SGS benze umsebenzi wokucwaningwa kwamabhuku ngokucophelela nangokucophelela, siyajabula ukumemezela ukuthi ekugcineni sithole ukuvunywa kwe-SGS kanye nesitifiketi esibuyekeziwe so “umphakeli ohloliwe”. Sisebenza ...
Igumbi Lokukhombisa elenziwe ngaphakathi e-China Libuyekeziwe
Siyilungu lomphakeli weMade-In-China kusukela ngo-2016, kanye noMhlinzeki oCwaningiwe we-SGS. Ukuhweba Oku-inthanethi, siyakwamukela ukuthi uvakashele igumbi lethu lombukiso ukuze uhlole imikhiqizo yethu, imibono yakho kanye ...
Ukunwetshwa Komkhiqizo Omusha-I-Anhydrous Lanolin
Kusukela ngo-2012, sinokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi emkhakheni weLanolin, okwamanje, sesivele sakha idumela elihle ezimakethe.Ukuze sinikeze iLanolin kubalingani bethu bomhlaba wonke, sinquma ukwandisa iphothifoliyo yethu yomkhiqizo futhi bhala iLanolin njengomunye wemikhiqizo yethu enamandla eqinile ....
I-Kojic acid vs Hydroquinone ekunakekelweni kwesikhumba
I-Kojic acid ne-hydroquinone yizinto ezimbili ezenziwa kakhulu ezisetshenziswa ekunakekeleni isikhumba esikhanyayo. Zisetshenziswa emikhiqizweni eminingi yokunakekelwa kwesikhumba futhi zisiza ekwelapheni ukwanda kwe-hyperpigmentation, izindawo ezimnyama, ukulimala kwelanga njll. Bangavimbela ngokuqinile ...